I-Semalt Ibeka Kantu: I-Ultimate Visual Web Scraping Tool
Kungakhathaliseki ukuthi usebenza ekukhipha idatha yezimali noma izinhlu zamanani ezivela kumasayithi e-commerce ngaphandle Ukubhala ikhodi, Kantu iyona engcono kakhulu kuwe! Ngokuba abathanda abathandi, i-web data extraction yinkqubo yokuthola ulwazi olubalulekile kusuka kumawebhusayithi nokulondoloza kuma-spreadsheet nolwazi olusetshenziswayo.
Umhleli weKantu usebenza kanjani?
Kantu ngokuzenzakalelayo idonsa idatha kusuka kumawebhusayithi ngaphandle kokudinga ukuthi ube nolwazi lohlelo. Nge-Kantu, ukuguqula okuqukethwe kwewebhu kumininingwane ehleliwe futhi eqoshiwe akuyona umsebenzi okhuni. Leli ithuluzi le-web scraping liyaziwa kakhulu ngokukhipha umbhalo kusuka ku-Portable Document Format (PDF) namavidiyo.
Idatha ekhishiwe ivame ukulondolozwa ngefomethi yamafayela e-CSV noma ebhaliswe kuma-yolwazi nge-Kantu's Application Programming Interface (API). I-Kantu ivumela abathengisi ukuba babone futhi bagcizelele idatha ezobheka ngokubonakalayo. Ukusebenzisa lesi sxazululo se-web scraping silula. Ukuze uqoqe idatha kusuka kuwebhusayithi usebenzisa i-Kantu Wizard, umane udwebe amafreyimu amnyama ukuze ubhale idatha ehlosiwe.
Umhleli we-Kantu usebenzisa i-Optical Character Recognition (OCR) ukuthola ulwazi oluvela kumthombo wakho we-HTML. I-OCR iyindlela ephezulu esebenzayo yokwenza amafayela e-PDF, amavidiyo, nezithombe eziphakeme kakhulu.
Kungani ukhetha umhleli we-Kantu?
Umhleli we-Kantu ungomunye wamathuluzi aphezulu asetshenziselwa ukukhwa kwewebhu. Lo mhleli usetshenziselwa izinhloso ezehlukene. Nazi izizathu eziphezulu okufanele uzicabangele i-Kantu yephrojekthi yakho elandelayo yokukhipha iwebhu.
Izici ezakhelwe ngaphakathi
Isihleli se-Kantu siza nezici ezakhelwe njengezikripthi, izikripthi, nama-macros. Nge-Kantu, ungakwazi ukukhipha idatha kusuka kuwebhusayithi ngokwenza ngezifiso izici zayo ukuze zihambisane nezidingo zakho kanye nokucaciswa kwakho.
Akudingeki ufunde ukuthi ungasebenza kanjani nalokhu noma lolulimi lohlelo njengoba ithuluzi lihlanganiswa nalo lonke ulimi lokuhlela.
Izici ezakhelwe ngaphakathi kwe-PDF ne-OCR
Ngolwazi lwakho, i-Kantu Editor yiyona kuphela ithuluzi lokukhipha idatha yewebhu Izici ze-OCR. Nge-Kantu, ukukhipha idatha kusuka kumavidiyo ne-PDF kufana nokudlala umdlalo wevidiyo.
Isimo sokulondoloza isimo - Ithuluzi le-Kantu webhulogi lewebhu lisetshenziselwa ukuqapha ukuqhubekela phambili kwama-e-business portals. Uma unesitolo se-intanethi, i-Kantu ikuvumela ukuba uhlaziye imiyalo eyenziwe nemininingwane yesicelo;
Hlola uphinde uhlole amanani wemikhiqizo ehlukene;
Ukuvuselela izinhlelo ngezinga lokushintshaniswa kwamasheya;
Ukulanda nokugcina idatha kuma-spreadsheet;
Faka imininingwane ewusizo usebenzisa i-OCR;
Landela izansi zokuncintisana phansi;
I-Kantu iyithuluzi lokuhlunga eliwusizo elisha idatha kusuka kuwebhusayithi futhi ilondoloza kuma-spreadsheet namafayela e-CSV. Uma iphrojekthi yakho enkulu elandelayo ixhunywe ngokukhishwa kwamadokhumenti namavidiyo we-PDF, i-Kantu web scraping kufanele ihlolwe Source .